Nasasho Qaad | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 13, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Jenn Lisak Golding
Ma aqaano adiga, laakiin ka mid ahaanshaha adduunka tiknoolajiyada suuqgeynta ayaa had iyo jeer igu hor leh kumbuyuutarka hortiisa ama miiskeyga. Sida muuqata, taasi uma fiicna jidhkeena, sida lagu sheegay cilmi baaris ay sameysay Learnstuff.com.
Dadku guud ahaan waxay bilig bilig yeeshaan 18 jeer daqiiqaddii. Laakiin markaad indha indheynayso shaashadda kumbuyuutarka, waxaad kaliya u egtahay inaad ilbiriqsato illaa 7 jeer, taasoo u horseedi karta Cilladda Aragga Computerka. 9 ka mid ah 10kii qof ee qaata in ka badan 2 saacadood oo isdaba-joog ah iyagoo fiirinaya shaashadda kumbuyuutarka, iyo isticmaalka jiirka in ka badan 20 saacadood usbuucii wuxuu kordhinayaa halista aad u leedahay carpal tunnel syndrome 200%. Iskusoo wada duuboo, waxay umuuqataa inaad fiirineyso shaashadda kumbuyuutarka MA ahan wax u wanaagsan caafimaadkeena.
Laakiin nasashadu waxay si weyn u caawin kartaa hurdadeenna, indhaheenna, dhabarkeenna, iyo dabeecaddeenna guud. Hubi qaar ka mid ah macluumaadka kale ee ku jira sawir-gacmeedka qabow ee loogu talagalay sida loo ilaaliyo caafimaadkaaga markaad ka shaqeyneyso kombiyuutarka maalinta oo dhan!
Tags: ComputerCilladda Aragga KumbuyuutarkaDeskscreenNasasho qaado
Nov 13, 2012 at 10: 15 AM
Jan 18, 2013 saacadu markay ahayd 1:26 PM
Haye jenn, Waan ogahay in tani ay tahay wax halkan ka baxsan, laakiin ma ogaan karaa cidda sawir qaade u ah soo gelitaankaan gaarka ah? Aad baad u mahadsantahay!
Jan 18, 2013 saacadu markay ahayd 3:43 PM
Waa inaad ka hubisaa dadka waawayn ee Learnstuff @tanxiuwen: disqus! Waxay daabaceen infographic - oo shaqo weyn ayey qabteen!